Xaabsade Wasiirka Warfaafinta Somaliland Oo Cayimay Xiliga Ay Dalka Keenayaan Idaacad Iyo Waxay Ka Yeelayaan Masuuliyiinta Somaliland Ee Garoowe Ku Xidhan | Araweelo News Network (Archive) -
Xaabsade Wasiirka Warfaafinta Somaliland Oo Cayimay Xiliga Ay Dalka Keenayaan Idaacad Iyo Waxay Ka Yeelayaan Masuuliyiinta Somaliland Ee Garoowe Ku Xidhan
Boorama(ANN) Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyigelinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade ayaa sheegay inay xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo bisha October ee sannadkan 2011 ay dalka keeni doonto idaacad awood badan oo dalka oo dhan wada gaadhaysa, taas oo sida uu xusay laga
dhegaysanay doono meel walba.
Mr. Xaabsade oo socdaal hawleed ku jooga magaalada Boorama ee xarinta gobolka Awdal waxa uu sidaa ku sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Huteelka Rays. Sidoo kalena waxa uu jawaab ka bixiyay su’aal la xidhiidhay waxa ay xukuumadda Somaliland ka yeelay masuuliyiinta bishii hore maamulka puntland ka afduubneen duleedka Taleex ee ay ku rideen xukunada.
Wasiirka Wasaarada warfaafinta ee Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade waxa uu shirkaa jaraa’id kaga warbixiyay waxqabadyo kala duwan oo sida uu sheegay wasaarada warfaafinta ka hirgalay mudadii ay xukuumadda cusub ee uu ka tirsan yahay talada dalka haysay, wuxuuna xusay in markii u horaysay ay ku guulaysteen in telefishanka Qaranka la gaadhsiiyay guud ahaan qaarada Yurub, isagoo talaabadaas ku tilmaamay mid ka mid ah waxqabadyada ay u xusul duuban yihiin hirgalintooda.
Oday Xaabsade, waxa uu ka hadlay baahida ay ummada Somaliland u qabto sidii loo heli lahaa idaacad wada gaadha dalka oo meel walba laga dhegeysto, isagoo cadeeyay in qorshaha ku talo galkoodu uu yahay sidii bisha tobnaad ee sannadkan 2011 ay u keeni lahaayeen idaacadii weynayd ee ay xukuumadu balan qaaday, isla markaana ay si sharci ah u naadiyeen shirkadda keenaysa taas oo mar hore soo dhamaatay. Laakiin wasiirku ma xusin halka lagu naadiyay qandaraaska Idaacada.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Mr. Xaabsade wuxuu ka hadlay cabshooyinka saxaafada ee dhinaca Xukuumadda, isagoo ku dooday in xukuumadiisu ay si hufan ula dhaqanto saxaafada madaxa banaan ee dalka waxaanu meesha ka saaray inaanay jirin wax cabudhin ah oo dawladu ku hayso warbaahinta.
Laakiin waxa uu ku eedeeyay qaar ka mid ah saxaafada dalka inay baahiyaan warar uu ku sifeeyay xajiimayn oo wax u dhimi kara sumcada qaranimada Somaliland iyo dedaalada loogu jiro in qarankani aqoonsi caalami ah ka helo adduun weynaha, balse muu magcaabin kuwa ay yihiin.
Mar uu si gaara ula hadlayay suxufiyiinta gobolka Awdal waxa uu sheegay in looga baahan yahay sidii ay bulshadooda ugu adeega lahaayeen si wadaniyadi ku jirto, isagoo usoo jeediyay inay ka dhawrsoonaadaan wax kasta oo iska horkeenaya ummadooda, isla markaana ay kaalintooda ka ciyaaraan sii xoojinta horumarka iyo nabadgalyada dalka.
Dhinaca kale Wasiirka Warfaafinta Somaliland Mr. Axmed Cabdi Xaabsade oo wax laga weydiiyay waxay xukuumad ahaan ka yeelayaan mas’uuliyiintii duleedka degmada Taleex ee Gobolka Sool ee ay horaantii August ka afduubeen malayshiyada ka tirsan maamulka Garoowe waxa uu sheegay in arrintan loo saaray gudi todoba xubnood ah oo ka tirsan golaha Wasiirada, kuwaas oo uu sheegay inay hawshaa ku dhex jiraan, wuxuuna intaa ku daray inay arrintaasi sida uu dhakhsaha badan ay ku soo dhamaan doonto. Laakiin muu sharixin qaabka gudidaasi u wado iyo inuu jiro wada hadal dhinaca Somaliland iyo Puntland oo arrintaa la xidhiidha.